बाजेको सेकुवालाई सर्वोच्चको साथ, शिलबन्दी खोल्न सरकारलाई आदेश ! - बाजेको सेकुवालाई सर्वोच्चको साथ, शिलबन्दी खोल्न सरकारलाई आदेश !
बाजेको सेकुवालाई सर्वोच्चको साथ, शिलबन्दी खोल्न सरकारलाई आदेश !
२०७५, १३ भदौ, 04:13:17 PM
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले आज बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सिलबन्दी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बाजेको सेकुवाका लगानीकर्ता चेतन भण्डारीको पत्नी नीतिमा भण्डारीले यही भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन ।
सरकारले शङ्काको भरमा बाजेको सेकुवा शाखामा तालाबन्दी हुँदा सो निर्णय खारेज गर्न आदेशमा माग गरिएको थियो ।